नेपालमा मनाइने दोस्रो ठूलो चाड तिहार हो। कार्तिक महिनाको कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि लगातार पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यो पाँच दिनको अवधिलाई यमपञ्चक पनि भन्दछन्। यमपञ्चक लागेपछि भगवान् सूर्यका पुत्र एवं मृत्युका देवता यमराज यमलोकबाट बहिनी यमुनाको घर मर्त्यलोकमा आएर यमपञ्चकभरि विराजमान भई भाइटीका लगाएपछि यमलोक फर्कने पौराणिक आख्यान रहेको छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन यमराजको सन्देशवाहक […]
By प्रा.डा. देवमणि भट्टराई in चाडपर्व . March 1, 2017
कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि शुक्लपक्षको द्वितीयासम्मका पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ। यस बीचका देवता यमराज भएकाले यी पाँचै दिनमा यमराजलाई घरको ढोकाबाहिर तुलसाको मोठ छेउमा सन्ध्याकालमा दीपदान गरिन्छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन काग र दोस्रो दिन कुकुरलाई पूजा गरेर भोजन गराइन्छ। तृतीय दिनमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा (लक्ष्मी पूजा) गरिन्छ भने चौथो दिन गाई–गोरुको पूजा, गोवर्धन पर्वतको पूजा […]
By उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल in चाडपर्व . March 2, 2017
नेपालमा मनाइने दोस्रो ठूलो चाड तिहार हो। कार्तिक महिनाको कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि लगातार पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ। यो पाँच दिनको अवधिलाई यमपञ्चक पनि भन्दछन्। यमपञ्चक लागेपछि भगवान् सूर्यका पुत्र एवं मृत्युका देवता यमराज यमलोकबाट बहिनी यमुनाको घर मर्त्यलोकमा आएर यमपञ्चकभरि विराजमान भई भाइटीका लगाएपछि यमलोक फर्कने पौराणिक आख्यान रहेको छ। यमपञ्चकको प्रारम्भमा आफू पृथ्वीलोकमा आउन […]
नेपाली पात्रो युट्युब भिडियाे